Budata Nitro Reader maka Windows
Budata Nitro Reader
Free Budata maka Windows (1.60 MB)
Budata Nitro Reader,
Nitro Reader bụ mmemme nke pụtara ìhè na ihu igwe ya na onye ọrụ ya nke na-enye gị ohere ịgụ ma dezie faịlụ PDF
Site na mmemme ahụ, nke nwere interface dị mfe ma dịkwa mfe iji, ọ na-adị nro nke ọma ịhazi faịlụ PDF. Nwere ike imeghe faịlụ PDF site na enyemaka nke ihe nchọgharị faịlụ a ma ọ bụ dọrọ na dobe usoro.
Nwere ike ịchekwaa ederede ị dere na mmemme ahụ dị ka PDF. Enwekwara ike ịkekọrịta faịlụ PDF gị site na e-mail ma ọ bụ bipụta ha.
Inwe ike mbugharị na na nke akwụkwọ ị na-agụ site na iji nke mbugharị atụmatụ, na-agbakwụnye, otu akwụkwọ nke gị mmiri mbinye aka na akwụkwọ, na-agbakwunye ndetu na faịlụ ndị ọzọ bara uru atụmatụ nke usoro ihe omume.
Mmemme nke na-akwado ọrụ gị site na ịtụgharị ụdị faịlụ dị iche iche (dị ka DOC, DOCX, HTML, TXT, BMP, JPG, WMF) na usoro PDF ka a na-enye nefu.
Nitro Reader Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.60 MB
Mmepụta: Nitro PDF